Ogaden News Agency (ONA) – Bulshada Itobiya qaybaheeda kala duwan oo lagu qasbayo inay baroortaan – By Selam Beyene
Bulshada Itobiya qaybaheeda kala duwan oo lagu qasbayo inay baroortaan – By Selam Beyene
Aqoonyahan PhD haysta oo si fiican ula socda xaaladda Itobiya ayaa ku tilmaamay inay garab marsan yihiin ururka TPLF fursadii ay kaga faa’idaysan lahaayeen dhimashada KT Meles oy kula heshiin lahaayeen bulshada, taasoo u saamixi lahayd inay iska fogeeyaan dambiyadii ay qawmiyad ahaan ka galeen bulshaweynta shacabka Itobiya ee ahayd cadaadiska aan la koobi karin iyo codkoodii ay dhaceeb iyo saboolnimada ay badeen. Kaadirka TPLF ee weli xukunka gacanta ay ugu jirto waxay argagixin ku hayaan shacabka iyagoo ku qasbaya in aad loogu ooyo aaska Kaligii Taliyaha dhintay taasoo u dhiganta aaskii ree Kim ee Waqooyi Kooriya (North Korea).
Dr. Selam Beyene, wuxuu sheegay inay dhowr bilood si qashiinima ah ay dadweynaha iyo caalamkaba uga qariyeen xaaladdiisa caafimaad iyo dhimashadiisiiba taasoo u muujisay caalamka in hogaanka dalkaa uusan midaysnayn oo waliba aanay lahayn dibloomaasiyad iyo xukun suuban toona.
Markii ugu dambayntii ay dawladaha deeqda bixiya ku qasbeen inay runta u sheegaan shacabka, waxaa mar 2aad soo ifbaxday aqoon daridooda iyo xaaladdan oo kale taatikadii loo baahnaa inay u maareeyaan oy garan waayeen, waxaana soo ifbaxday inay ka jirto Itobiya siyaasda iyo nidaamka ku dhisan qawmiyad kali ah iyo musuq-maasuq. Wuxuu yidhi Dr. Selam Beyene, iyagood moodo mas madaxa laga bururiyay oo kale ayay ugu muuqatay TPLF in jiritaankooda uu ku dhisan yahay inay soo bandhigaan sawirka KT Meles oo aad weyn oy hooskiisa hadhsanayaan. Iyadoo dagaal hoose oo adag uu ka dhex socdo hogaanka TPLF ayay awoodoodii isugu geeyeen kaadirka TPLF inay buun-buuniyaan KT Meles oy ka rajaqabaan in siyaasadisii ay sii socoto.
Tan iyo markii shaaca laga qaaday dhimashadiisa waxaa lagu soo rogay dalka bandow aan qofna dhaqaaqi karin (a state of siege). Laga bilaabo tuulada ugu yare e ku taala Shoa ilaa iyo magaal-madaxyada sida Debre Berhan, Jimma, Gondar, Adwa, Nazareth and Addis Ababa, dhamaan muwaadiniinta, mid shaqaale ah iyo mid aan shaqaynin, fanaan iyo cayaartoy caan ah, ciidan ilaa wadaadkii, dhamaantood waxaa la faray inay muujiyaan murugadooda oy u ooyaan Kaligii-taliyaha dhintay mudada asayda ay taalo. Sidoo kale ayaa safaaradaha la faray inay madaxda u saxiixaan buuga la dhigay, iyadoo diblomaasiyiinta Afrika ee Adisababa jooga la faray inay madaxdooda Kalitalisyada ah ka codsadaan inay amaan ka badiyaan saaxiibkoodii dhintay.
Qoraaga wuxuu ku dheeraaday in aqaliyadda TPLF ee dalka xukunta ay rumaysan yihiin in xaaladda ay sidii hore un ay ahaan doonto (business as usual). Taariikhda yaree ay xukunka haysteen waxba kama kororsan. Aaladda dacaaydeed iyo Sirdoonkooda xoogan ayaa ka indha saabay inay arkaan xaaladda dhabta ah, taasoo keeni doonta xaalad ku haboon kacdoon shacab oo aan la sadaalin karin meesha uu ku dambayn. Ma sii socon doonto balaayiinta doolar ee deeqda ah ee loo leexiyay in lagu qoro jawaasiista dadka ku dhex jira oo lagu tababaro maleesiyaadka naxariista daran oo mushaharka loo siinayo, ka dibna waxaa yaraan doona xooga loo adeegsanayo in dadweynaha lagula dagaalamo. Markaa ayay TPLF-tu maskaxda uu soo noqon doontaa oy dadka soo dhex gali doonaan ayuu tilmaamay Dr. Selam Beyena.
Maqaalka oo aad u dheer una qiimi badan ayuu qoraaga ugu baaqayaa aqoonyahanada Itobiya inay ka qayb-qaataan dagaalka dhabta ah ee lagula jiro adoonsiga iyo cadaadiska lagu hayo dadweynaha. Wuxuuna ku dhaliilay aqoonyahanka Itobiya arintaa oo uu sheegay in aanay waligeed dhicin sidanoo kale inay aqoonyahanka uga dhug la’aadaan dhibaatada dadkooda haysata.
Wuxuu sidoo kale ugu baaqay dawladaha deeqda bixiya inay hakiyaan deeqda ay siinayaan xukuumad dambiile ah oon ixtiraamaynin dhamaan xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah ee u yaala xuquuqul insaanka iyo xoriyadda saxaafadda. Hadii aanay kabaynin dawladaha reer galbeedka ma sii jirteen xukuumaddan ku dhisan Nidaamkii Stalin-iga, mar hore ayayna kala daadan lahayd oo waa-cusub oo dimoqraadi iyo xasilooni iyo barqwaaqo ah uu ka dhalan lahaa dalka Itobiya, ayuu ku soo gunaanaday.
Bal Filimkan la yaabka lehna daawo ( mahadnaq Shilaabonews)